by न्युज डेस्क ३० असार २०७८ २३:३२ 14 July 2021 0
मुम्बई : बलिउड अभिनेत्री इशा देओल वेव सिरिज ‘रुद्र’ मा काम गर्ने भएकी छन् । पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा गुमनामजस्तै बनेकी इशा रुद्रमार्फत अभिनयमा कमब्याक गर्न लागेकी हुन् ।
भरत तख्तानीसँग सन् २०१२ मा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि अभिनेत्री इशा बलिउडबाट टाढिएकी थिइन् । लामो वर्षको अन्तरालपछि उनी ‘रुद्र’मार्फत अभिनयमा फर्किन लागेकी हुन् । इशा उक्त सिरिजमा अभिनेता अजय देवगणको जोडीका रुपमा प्रस्तुत हुने छिन् ।
इशाले आफू अभिनयमा फर्किन लागेको सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना प्रशंसकलाई जानकारी दिएकी छन् । ‘रुद्र मेरो डेब्यु वेव सिरिज हो । यो सिरिजमा कलाकार अजय देवगणसँग म काम गर्दैछु । अजय र मैले केही चलचित्रमा एकसाथ काम गरेका छौं’, उनले ट्विटरमा लेखेकी छन् । अजय र इशाले विभिन्न हिन्दी चलचित्रमा सँगै काम गरेका छन् । उनीहरूले युवा, एलओसी ः कारगिल, क्यासलगायतका चलचित्रमा काम गरेका छन् ।
चर्चित अभिनेता धमेन्द्र र अभिनेत्री हेमा मालिनीकी छोरी इशाले बलिउडमा रहँदा राम्रो छवि बनाउन सकेकी थिइनन् ।
यसकारण पनि उनलाई पछिल्लो समय दर्शकले भुलिसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यस सिरिजमा अजय र इशासँगै अन्य विभिन्न चर्चित कलाकारको पनि अभिनय रहने निर्माण पक्षले जनाइएको छ ।
SQL requests:213. Generation time:2.372 sec. Memory consumption:17.36 mb